ဥရောပသည်ရထားသိကောင်းစရာများပြီးတော့ hack | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပသည်ရထားသိကောင်းစရာများပြီးတော့ hack
ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာမှုအတွက်ရထားအကြံပေးချက်များခရီးသွားများအတွက်မရှိမဖြစ်များမှာ. ပထမဦးစွာ, ဥရောပခရီးအဘို့များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. သငျသညျအဆင်းလှတံတားများကြည့်ဖို့လိုပေမည်, မီးရထားဘူတာ, ညီတူညီမျှအတူတူ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်း. သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသငျသညျမြား၏အံ့သြဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုကြည့်ဖို့ခရီးသွားလာနေသော အီတလီ. သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျဖွစျနိုငျသ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ခရီးသွားလာ. သို့မဟုတ်အထက်ပါအရာအားလုံးနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ပျော်စရာခရီးကိုနှစ် ဦး စလုံးလုပ်နေတာ – နယ်လှည့်အဘို့အကြောင်းပြချက်အမြဲများ၏လိုအပ်ချက်မတူကြပေမယ့် အကြံပေးချက်များနှင့် Hack ခရီးသွားများအတွက်တူညီရှိနေဆဲ.
အကောင်းဆုံးရထားသိကောင်းစရာများ & ရထားဖြင့်ဥရောပခရီးသွားဘို့ hacks
ပထမဦးစွာ, လုပ်မထားဘူး လူသစ်ခရီးသွားအမှား ဥရောပတစ်ခွင်ကိုတစ်ခေါက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်း၏. ဥရောပတဦးတည်းခရီးစဉ်အတွက်ကိုမြင်လွန်းကြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုအပြင်, ဥရောပတိုက်တွင်မြို့ကြီးများလည်းတဦးတည်းခရီးစဉ်အတွက်ကြည့်ဖို့ကြီးလွန်း. အဖြစ်မှန်မှာတော့, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်အာရုံကိုရှေးခယျြနဲ့ကကပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်. ဒီဥရောပရန်သင့်ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်သောဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျပြင်သစ်ကဲ့သို့လူဦးရေသွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်, အီတလီ, စပိန်, နှင့် ဂျာမနီ.
ရှေ့ဆက် booking များအတွက်မီးရထားအကြံပေးချက်များကိုလည်းသင့်တစျခုလုံးကိုလမ်းခရီးဘို့ထိုင်ခုံ reserved ရှိသည်ဟုအာမခံချက်ကိုကူညီနိုင်မသာရှေ့ဆက်အချိန်အကူအညီနဲ့၏လက်မှတ်တွေ booking သင်သည်ဘတ်ဂျက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ. အစောပိုင်းဘွတ်ကင်လက်မှတ်တွေအများဆုံးအကျိုးဖြစ်ခြင်း၏အလငျး၌, ငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီသူတို့ရရှိနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်ဖို့အတွက် logging အကြံပြု (2-3 ကြိုတင်ခရီးလ). ထို့အပြင်, ရာသီအလိုက်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ခြင်းသည်လူအုပ်ကြီးကိုရှောင်နိုင်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာရနိုင်သည်. ထည့်မပြောပါနှင့်, ကြောင်းဘွတ်ကင်အစောပိုင်းသင်ကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့ကြီးမားတဲ့စီတန်းရှောင်ရှားကူညီပေးနိုင်ပါသည်. ထို့အပွငျ, သငျသညျသှားဖို့ဘွတ်ကင်လျှင် ခရီးသွားဧည့်ဟော့စပေါ့ ဇူလိုင် / သြဂုတ်လတူသောမြင့်မားသောရာသီကြိမ်အတွင်း, သင်သည်ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အလားအလာနည်းပါးပြီး၊. ဒါကြောင့်ဒီအချိန်တွေမှာသင်မြင်တွေ့နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်ဆဲဖြစ်ပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတော့သင်လွတ်သွားပါလိမ့်မယ်. သငျသညျစုံတွဲတစ်တွဲသို့မဟုတ်အဖြစ်ခရီးသွားလာသောဖြစ်ရပ်အတွက် အုပ်စုတစ်စုတွင်သင်လျှော့စျေးနှုန်းများကိုခံစားခွင့်ရှိသည် မင်းခရီးတွေအတွက်. ဒါပေမယ့်သင်ကခရီးတစ်ခုလုံးကိုကြာချိန်များအတွက်စုံတွဲတစ်တွဲ / အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်အတူတူနေဖို့လျှင်, ဤအထူးလျှော့စျေးသာတရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျကိုမှတ်မိ.
ကြောင်းခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများများအတွက်ပထမဦးဆုံးမီးရထားအကြံပေးချက်များဖြစ်ပါသည်: ဥရောပနိုင်ငံခရီးသွားဧည့်ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများဖေါ်ပြခြင်းမရှိဘဲနယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီးသွားရခွင့်ပြုသောသူတို့အားအကြားသဘောတူညီချက်ရှိသည်ဖို့လေ့. ဥရောပသမဂ္ဂအတွက်နိုင်ငံများ, အထူးသဖြင့်, ခရီးသည်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုပြသစရာမလိုဘဲစွန့်ခွာခြင်းနှင့်ဝင်ခွင့်ပြု. သို့သျောလညျး, ဒီပွင့်လင်းနယ်စပ်မူဝါဒပါဝင်အားလုံးမဟုတ်ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများ ခရိုအေးရှားလိုပဲ, ဘူလ်ဂေးရီးယား, နှင့်ရိုမေးနီးယား. မတူတာကတော့, ဆွစ်ဇာလန်နှင့်နော်ဝေးကဲ့သို့သောသဘောတူညီချက်တွင်ပါ ၀ င်သောဥရောပသမဂ္ဂ၏အစိတ်အပိုင်းများမဟုတ်သောနိုင်ငံများရှိသည်.
တစ်ဦးကရထား Save တတ်နိုင်သမျှသငျသညျသလောက်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့လိုလား. ဒါကြောင့်ငါတို့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကသင့်ကိုဈေးအသက်သာဆုံးလက်မှတ်တွေရှာပေးတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Save A ရထားဆိုက်ကိုယခုရှာဖွေပြီးယူပါ3သင်၏နောက်ရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေမိနစ်. သငျသညျ Credit Card ကိုသုံးပြီးပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်, နှင့် 10 အခြားရွေးချယ်မှု.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-tips-hacks%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျ website တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရန်ဆက်သွယ်နိုင်သည် RSS Feed.
#traveleurope europetravel အကြံပေးချက်များ ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား